တရုတ်နိုင်ငံက Shenzhou-13 တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အာကာသယာဉ်မှူးများအား ဆုတံဆိပ်များဖြင့် ဂုဏ်ပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ Dongfeng ဆင်းသက်သည့်နေရာ၌ Shenzhou-13 လူစီးအာကာသယာဉ်၏ အပြန်အာကာသယာဉ်အခန်းမှ ထွက်လာသည့် အာကာသယာဉ်မှူးများ ဖြစ်ကြသည့် ကျိုက်ကျစ်ကန်း ၊ ဝမ်ရာဖိန် နှင့် ယဲ့ကွမ်းဖုတို့အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဇွန် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
Shenzhou-13 လူလိုက်ပါသည့်မစ်ရှင်မှ အာကာသယာဉ်မှူးသုံးဦးသည် ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတွင် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုများအတွက် ဆုတံဆိပ်များ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကျိုက်ကျစ်ကန်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အာကာသစခန်းတွင် ပထမဆုံး အမျိုးသမီး ဝမ်ရာဖိန်တို့အား ဒုတိယအဆင့် အာကာသယာဉ်အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုဆုတံဆိပ်များဖြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး ယဲ့ကွမ်းဖုသည် “သူရဲကောင်း အာကာသယာဉ်မှူး” ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ နှင့် တတိယအဆင့် ဆုတံဆိပ်အား လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဆုတံဆိပ်များအား တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်တို့က ပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Shenzhou-13 မစ်ရှင်သည် ကျိုက်ကျစ်ကန်းအတွက် ဒုတိယအာကာသမစ်ရှင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် မစ်ရှင်အတွင်း ဒုတိယအကြိမ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျိုက်ကျစ်ကန်းသည် အာကာသယာဉ် ပြင်ပလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း(EVAs) အား သုံးခါအထိ လုပ်ဆောင်ပြသခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ မည်သည့်တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးထက်မဆိုအများဆုံးစံချိန်ဖြစ်သည်။ ယင်းပျံသန်းမှုသည် ဝမ်ရာဖိန်အတွက် ဒုတိယအာကာသမစ်ရှင် နှင့် ယဲ့ကွမ်းဖုအတွက် ပထမဆုံးအာကာသမစ်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Shenzhou-13 လူစီးအာကာသယာဉ်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်တွင် လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသစခန်း ပင်မမော်ဂျူး Tianhe သို့ အာကာသယာဉ်မှူးသုံးဦးအား စေလွှတ်ခဲ့သည်။အာကာသအတွင်း၌ မစ်ရှင်တစ်ခုတည်းတွင် အရှည်ကြာဆုံးနေထိုင်မှုအဖြစ် တရုတ်အာကာသယာဉ်မှူးများသည် ပင်မမော်ဂျူး Tianhe ၌ ၆ လကြာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာကာသယာဉ်မှူးများသည် အာကာသယာဉ် ပြင်ပလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း(EVAs) နှစ်ကြိမ်အား လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အာကာသ၌ နေထိုင်စဉ်အတွင်း အာကာသစခန်းမှ တိုက်ရိုက်သင်တန်းနှစ်ခုအား ပို့ချခဲ့သည်။ ယင်းမစ်ရှင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာကာသစခန်းတွင် အသုံးပြုသည့် အဓိကနည်းပညာများကို အတည်ပြုခြင်းအပြီးသတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua Editor: huaxia 2022-06-21 22:44:15
BEIJING, June 21 (Xinhua) — Three astronauts from the Shenzhou-13 crewed mission were awarded medals for their service to China’s space endeavors on Tuesday.
Zhai Zhigang, the mission commander, and Wang Yaping, the first female on China’s space station, were honored with second-class aerospace achievement medals, while Ye Guangfu receivedathird-class medal and the honorary title “heroic astronaut.”
The Shenzhou-13 mission was the second space mission for Zhai, who served as commander for the second time during the mission. He has performed extravehicular activities (EVAs) on three occasions, the most by any Chinese astronaut so far. The flight was Wang’s second space mission and Ye’s first.
Launched on Oct. 16, 2021, the Shenzhou-13 spaceship sent the trio to China’s space station core module Tianhe, where they lived and worked for six months, the longest stay in space by Chinese astronauts onasingle mission.
They performed EVAs twice and delivered two live classes from the space station during their stay. The mission marks China’s completion of the verification of key technologies used on the space station. ■
Photo – In this combo photo, astronauts Zhai Zhigang, Wang Yaping and Ye Guangfu (from L to R) are out of the return capsule of the Shenzhou-13 spaceship at the Dongfeng landing site in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region on April 16, 20